Keio University - Yepamusoro Kunze Kwenyika muJapan
guta : Chiyoda-ku
inotangwa : 1858
Musakanganwa kuti discuss Keio University
Keio iri muTokyo uye Kanagawa, mumwe nyika guru zvikuru mumaguta. Kurarama Tokyo riri mukana wokuona Japan kuburikidza guta rayo guru rine zvakasiyana zviso zhinji: nemamwe tsika, runako, uye futuristic rwokugadzira. With vose ano nechokuita uye zvemazuva rimwe guta ano, Tokyo achangoroorwa yandaipuwa guta nenyika napo kurarama, uye mumwe yayo zvikuru uye cleanest. Tokyo ndiyewo mukana pasuo vose Japan uye navamwe Asia.
Uyai Keio uye kutanga rwendo rwenyu kuburikidza moyo peguta, pamwe kusiyana nokuona pamwe nokunzwa renyanzvi Keio uye muzvimwe zvinoitwa.
Kwaunogara anongova kukosha sezvo apo iwe uchidzidza. Keio chinopa vadzidzi vakasununguka, yakachengeteka zvipenyu munharaunda dzinokurudzira kudyidzana asi kubvumira zvakavanzika, saka unogona ushamwaridzane vezera rako asi vachizivawo nzvimbo kudzidza kuti rinotevera bvunzo. Uye mari yose panguva zvikuru kudzika pane akafanana mumayunivhesiti kumwewo kuJapan uye kunze. vadzidzi International vakodzera kuti chehondo dzidzo, uye Office Student Services iripo kubatsira vadzidzi vane nyaya vanogona nazvo muupenyu hwavo hwezuva nezuva.
Kunze mukirasi (uye dorm kamuri rako), hunogutsa kembasi upenyu kwakamirira. Kune pamusoro 450 makirabhu uye nzanga vanomhanya nokuzvidira nevadzidzi nokuda tsika dzose zvemitambo uye zvido. Kupinda imwe yakakurumbira zviitiko zvemitambo kufuka neDare Keio University Athletic Association, izvo pari zvino ine 40 pamutemo makirabhu uye zvikwata. Musakanganwa kuti abatane mumwe Keio kuti mudzidzi-mhanya kembasi mitambo, izvo kiyi huru rokudzidza gore uye vakabata pagore pamusoro mumwe nomumwe Keio kuti pazvikoro sezvo vamwe makurusa zviitiko mudzidzi zvapo Japan.
Iye zvino tava kurarama munguva kuchinja kukuru. kuchinja izvi zvakadai kwepasi pose, kuchembera vokuparidzira, nokuwedzera pose musika makwikwi, uye kuwedzera cyber nzvimbo dziri vangasimudzira achishandura yose nemamiriro munzanga tiri kurarama. Nokufamba nenguva yakadaro kuchinja kukuru, zvinova kuoma kuti tifunge zvinhu uye kugadzirisa matambudziko sokunge zvinongova Extensions zvekare.
Chii chinodiwa pano kukwanisa kunzwisisa itsva mamiriro ezvinhu uye chiito chakakodzera pakunzwisisa ichi. Nemamwe mashoko anokwanisa kufunga kuti iwe uchava mukuru kudiwa. More zvakananga, kukwanisa kufunga pachako ndiwo muitiro yokuziva yokuyerera, ndatsanangura nyaya, Kuongorora tsanangudzo yokuziva kana rinonyomba, uye kana tsananguro zvechokwadi bata, vachiiisa chiito kuumba zvinogadzirisa. Ndiyo nzira yokudzidza-yokuziva ane unsolved dambudziko, rokuvaka pfungwa kuti zvine musoro anotsanangura dambudziko, uye achiedza pfungwa kuburikidza zvesayenzi-siyana kusvika mhedziso.
saka, kukwanisa kufunga kuti iwe uri, saizvozvo, kurikumbira kudzidza, uye ndokusaka muvambi yedu Yukichi Fukuzawa, uyo akararama munguva huru kushanduka kubva feudal Edo kuti ano Meiji nguva, akasimbisa kukosha kudzidza. Munguva yokuchinja kukuru, kuitisa mberi, kutungamirira tsvakurudzo anova kuwedzera kukosha. Semuyenzaniso, tinofanira kutevera zvose zvakadzama uye interdisciplinary tsvakurudzo anogona kugadzirisa matambudziko akadai kwepasi uye yevagari zvokukwegura, izvo kutyisidzira kuenderera kwenzanga yedu, uye rokusika kutsvakurudza kuti unogona kubereka kukosha itsva kuti vanhu vedu zvikuru shoroma pasinei zvapo pose musika makwikwi uye kuwedzera cyber nzvimbo.
Kuti pave nezvemarudzi izvi kutsvakurudza, Keio University ari kuita zvose zvaanogona kupa nzvimbo iri nani edu nesimba-vanoshanda fakaroti nhengo uye vadzidzi, vakazvitsaurira kuna avo kutsvakurudza sayenzi chaiwo, sayenzi evanhu, uye nevanhu, vanokwanisa zvizere vanoziva kwaniso dzavo. muvambi wedu Yukichi Fukuzawa hwakagadzwa Keio University kupa vanhu kuburikidza nekudzidza munguva kuchinja kukuru, uye tinoda kuziva kuvambwa ake musimboti munyika dzinoitwa munyika kuburikidza kukudziridza vanhu vanogona kufunga kuti pachavo uye kuwana uchenjeri itsva kubatsira vanhu.
mutungamiriri wenyika, Keio University
Rorusununguko Science and Technology
Graduate School Tsamba
Keio University yakatangwa 1858 as a School of Western studies located in one of the mansion houses in Tsukiji by the founder Fukuzawa Yukichi. Its root is considered as the Han school for Kokugaku studies named Shinshu Kan established in 1796. Keio changed its name as “Keio Gijuku” mu 1868, which came from the era name “Keio” uye “Gijuku” as the translation of Public school. It moved to the current location in 1871, established the Medical school in 1873, and the official university department with Economics, Law and Literacy study in 1890.
Unoda discuss Keio University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Photos: Keio University pamutemo Facebook